Gaduudo Carwo oo ku Geeriyootay magaalada Hargeysa | SAHAN ONLINE
Gaduudo Carwo oo ku Geeriyootay magaalada Hargeysa
Shamis Abuukar(Gaduudo Carwo)
HARGEYSA – Waxaa maanta waaberigii ku geeriyootay magaalada Hargeysa Alle ha u naxariistee Shamis Abuukar(Gaduudo Carwo) oo ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee Idaacadii ugu horreysay ee Raadiyaha Hargeysa ka heesta 1952.
Shamis Abookar ayaa sannadihii u danbeeyay xannuunsanayd, waxaana geerideeda BBC Somali u xaqiijiyay Adam Nugaal oo ka tirsan qoyskeeda.
Abwaan Saxardiid Maxamed Jebiye oo fanka ku soo jiray in ka badan lixdan sano iyo abwaan yuusuf Shaacir ayaa labaduba BBC u sheegay in Guduudi Carwo ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee idaacad ka heesta.
Xilligii ay Guduudo Carwo bilowday in ay heesto, dumarka kumaysan dhiiran jirin fanka iyo ka hadalka idaacadaha.
Doorka dumarka ee ruwaayadihii xilligaa iyo heesaha waxaa matali jiray rag, ka hor inta aysan Shamis Abookar aysan billaabin heesaha. Maadaama dumarka aan lagu aqoon heesaha,taasi waxay sababtay in sannadihii ugu horeeyay la qariyo magaceedii, waxaana loo bixiyay Guduudo Carwo.
Shir looga hadlayo hanaanka maaliyadeed ee Federaalka oo lagu qabtay Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo boggaadiyay sharci uu Ansixiyay Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
Talyaaniga iyo Hay’adda FOA oo ka caawineysa Soomaaliya horumarinta Beeraha[Sawirro]
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo markii u horeysay ka hadlay mooshinka laga keenay Madaxweyne Farmaajo
Soomaaliya oo ruqsad Kalluumeysi siisay Shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha